သင့်ကို မြန်မြန်ရုပ်ရင့်သွားစေတဲ့ နေ့စဉ် အလေ့အထ ( ၁၀ ) မျိုး - Real Gaming Myanmar
သင့် ရုပ်ရည်က လက်ရှိအသက်ထက် ပိုရင့် နေသလား။ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ရုပ်ရင့်တာအပြင် သင်နေ့စဉ်နေထိုင်စားသောက်မှု အလေ့အထ တချို့ကြောင့်လည်း မြန်မြန်ရုပ်ရင့်စေပါတယ်။ သင့်ကို ရုပ်ရင့်စေတဲ့ အလေ့အထတွေကို ပြောင်းလဲကြည့်ရအောင် … ။
အဆီမပါတဲ့ အစာတွေကိုပဲ စားနေရင် အသားအရေက အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းပြီး အရေးကြောင်း ထင်စေနိုင်ပါတယ်။ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်အဆီကို စားပေးရင် အသားအ ရေချောမွေ့ပြီး နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပါတယ်။ အရေးကြောင်းကင်းဖို့ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက် ဆစ်ပါတဲ့ ငါးအဆီ၊ အခွံမာသီး၊ အစေ့အဆန်တွေ ကိုစားပေးသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ် တဲ့ အဆီ (ဥပမာ သံလွင်ဆီ)ကို ရွေးစားတတ်မှ အသားအရေက အရွယ်တင်နုပျိုမှာပါ ….. ။
ဖျော်ရည်တွေကို ပိုက်နဲ့ သောက်တာကြောင့် နှုတ်ခမ်းစူသွားပြီး နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် အရေးကြောင်း တွေထင်ကာ ပါးရေတွန့်တတ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ် သောက်ရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ ဖျော်ရည်သောက်ရင် ဖန်ခွက်နဲ့ သောက်ပါ၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ …. ။
ကြာရှည် ဘေးတစောင်းအိပ်တာက ပါးပြင်နဲ့ မေးစေ့မှာ အရေးကြောင်းထင်စေနိုင်ပါတယ်။ ပက် လက်လှန်ပြီး အိပ်တာက အသားအရေအတွက် အ ကောင်းဆုံးအနေအထားဖြစ်ပြီး လန်းဆန်းနုပျိုစေတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ် …. ။
ကိုယ်ဟန်အနေအထားမမှန်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပုံမှန်တည်ဆောက်ပုံကို ထိခိုက်စေပြီး ကြွက်သားနဲ့ အရိုးတွေ တောင့်တင်းရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကိုက်ခဲနာကျင်ပြီး နုံးချည့်ညောင်းညာကာ ရေရှည် မှာ ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်တတ်ပါတယ် …. ။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ် အလွန်အမင်းခံရ တာကြောင့် အရွယ်မတိုင်ခင် အရေပြား အိုမင်းမှု ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်ရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ သက် ရောက်မှု မခံရစေဖို့ ဘယ်နေ့မှာမဆို နေကာခရင်မ် လိမ်းပါ …. ။
အပူပေးစနစ်ကို အလွန်အမင်း အသုံးပြုတာ ကြောင့် အခန်းတွင်း လေထုက အလွန်ခြောက်သွေ့ သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ အသားအရေနဲ့ ဆံပင်သား အလွန်အမင်း ခြောက်သွေ့ပြီး အရေးကြောင်း တွေ ပိုထင်တတ်ပါတယ် …. ။
အရွယ်ရောက်သူတွေက တစ်ညမှာ အနည်း ဆုံး အိပ်ချိန် ၇ နာရီ လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်ရေး၀၀ မအိပ်တာကြောင့် ပင်ပန်းတဲ့ အသွင်ဖြစ်စေပြီး ဘဝသက်တမ်းကိုတိုတောင်းစေပါတယ်။ စွမ်း အင်ကုန်ခမ်းသလို ခံစားရရင်၊ ကိုယ်အလေးချိန် မြင့်တက်နေရင် အိပ်ရာ စောစောဝင်ဖို့ ကျွမ်းကျင် သူတွေက အကြံပြုထားပါတယ် …. ။
သကြားကဲတဲ့ အချိုစာတွေ စားလွန်းရင် လည်း အသားအရေကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို သွား တွေကိုလည်း ပိုးစားလွယ်စေပါတယ်။ သွားတွေ မရှိတာက ရုပ်ရင့်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ …. ။
တီဗီကြည့်ချိန် တစ်နာရီကြာတိုင်း ဘဝသက် တမ်း ၂၂ မိနစ်လျော့ကျစေတယ်လို့ လေ့လာမှု အရ သိရပါတယ်။ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ချိန်များလွန်းရင် နာရီဝက်ကြာတိုင်း တစ်ကြိမ် လမ်းထလျှောက် ပေးပါ …. ။
လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးအရ နာတာရှည် စိတ်ဖိ စီးမှုဒဏ်ခံရတာကြောင့် ဆဲလ်တွေကို ရေရှည် ထိခိုက်စေပြီး အိုမင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို တိုးစေနိုင်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လာရင် ဖိစီးမှုကိုတွန်းလှန်နိုင်မယ့် လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ပြုလုပ်ပေးရပါမယ် … .။
သငျ့ ရုပျရညျက လကျရှိအသကျထကျ ပိုရငျ့ နသေလား။ မြိုးရိုးဗီဇကွောငျ့ ရုပျရငျ့တာအပွငျ သငျနစေ့ဉျနထေိုငျစားသောကျမှု အလအေ့ထ တခြို့ကွောငျ့လညျး မွနျမွနျရုပျရငျ့စပေါတယျ။ သငျ့ကို ရုပျရငျ့စတေဲ့ အလအေ့ထတှကေို ပွောငျးလဲကွညျ့ရအောငျ … ။
အဆီမပါတဲ့ အစာတှကေိုပဲ စားနရေငျ အသားအရကေ အရှယျမတိုငျခငျအိုမငျးပွီး အရေးကွောငျး ထငျစနေိုငျပါတယျ။ အိုမီဂါ ၃ ဖကျတီးအကျဆဈအဆီကို စားပေးရငျ အသားအ ရခြေောမှပွေီ့း နူးညံ့ပြော့ပြောငျးစပေါတယျ။ အရေးကွောငျးကငျးဖို့ အိုမီဂါ ၃ ဖကျတီးအကျ ဆဈပါတဲ့ ငါးအဆီ၊ အခှံမာသီး၊ အစအေ့ဆနျတှေ ကိုစားပေးသငျ့ပါတယျ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျ တဲ့ အဆီ (ဥပမာ သံလှငျဆီ)ကို ရှေးစားတတျမှ အသားအရကေ အရှယျတငျနုပြိုမှာပါ ….. ။
ဖြျောရညျတှကေို ပိုကျနဲ့ သောကျတာကွောငျ့ နှုတျခမျးစူသှားပွီး နှုတျခမျးတဈဝိုကျ အရေးကွောငျး တှထေငျကာ ပါးရတှေနျ့တတျပါတယျ။ ဆေးလိပျ သောကျရငျ ပိုဆိုးပါတယျ။ ဖြျောရညျသောကျရငျ ဖနျခှကျနဲ့ သောကျပါ၊ ဆေးလိပျဖွတျပါ …. ။
ကွာရှညျ ဘေးတစောငျးအိပျတာက ပါးပွငျနဲ့ မေးစမှေ့ာ အရေးကွောငျးထငျစနေိုငျပါတယျ။ ပကျ လကျလှနျပွီး အိပျတာက အသားအရအေတှကျ အ ကောငျးဆုံးအနအေထားဖွဈပွီး လနျးဆနျးနုပြိုစတေယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ ဆိုပါတယျ …. ။
ကိုယျဟနျအနအေထားမမှနျရငျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ပုံမှနျတညျဆောကျပုံကို ထိခိုကျစပွေီး ကွှကျသားနဲ့ အရိုးတှေ တောငျ့တငျးရတတျပါတယျ။ အဲဒီအခါ ကိုကျခဲနာကငျြပွီး နုံးခညျြ့ညောငျးညာကာ ရရှေညျ မှာ ပုံပကျြပနျးပကျြဖွဈတတျပါတယျ …. ။
ခရမျးလှနျရောငျခွညျဒဏျ အလှနျအမငျးခံရ တာကွောငျ့ အရှယျမတိုငျခငျ အရပွေား အိုမငျးမှု ဖွဈတတျပါတယျ။ နရေောငျခွညျရဲ့ ဆိုးရှားတဲ့ သကျ ရောကျမှု မခံရစဖေို့ ဘယျနမှေ့ာမဆို နကောခရငျမျ လိမျးပါ …. ။
အပူပေးစနဈကို အလှနျအမငျး အသုံးပွုတာ ကွောငျ့ အခနျးတှငျး လထေုက အလှနျခွောကျသှေ့ သှားတတျပါတယျ။ အဲဒီအခါ အသားအရနေဲ့ ဆံပငျသား အလှနျအမငျး ခွောကျသှပွေီ့း အရေးကွောငျး တှေ ပိုထငျတတျပါတယျ …. ။
အရှယျရောကျသူတှကေ တဈညမှာ အနညျး ဆုံး အိပျခြိနျ ၇ နာရီ လိုအပျပါတယျ။ အိပျရေးဝ၀ မအိပျတာကွောငျ့ ပငျပနျးတဲ့ အသှငျဖွဈစပွေီး ဘဝသကျတမျးကိုတိုတောငျးစပေါတယျ။ စှမျး အငျကုနျခမျးသလို ခံစားရရငျ၊ ကိုယျအလေးခြိနျ မွငျ့တကျနရေငျ အိပျရာ စောစောဝငျဖို့ ကြှမျးကငျြ သူတှကေ အကွံပွုထားပါတယျ …. ။
သကွားကဲတဲ့ အခြိုစာတှေ စားလှနျးရငျ လညျး အသားအရကေို ထိခိုကျစနေိုငျသလို သှား တှကေိုလညျး ပိုးစားလှယျစပေါတယျ။ သှားတှေ မရှိတာက ရုပျရငျ့စတေဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုပါ …. ။
တီဗီကွညျ့ခြိနျ တဈနာရီကွာတိုငျး ဘဝသကျ တမျး ၂၂ မိနဈလြော့ကစြတေယျလို့ လလေ့ာမှု အရ သိရပါတယျ။ ထိုငျခုံမှာ ထိုငျခြိနျမြားလှနျးရငျ နာရီဝကျကွာတိုငျး တဈကွိမျ လမျးထလြှောကျ ပေးပါ …. ။
လလေ့ာမှုအမြိုးမြိုးအရ နာတာရှညျ စိတျဖိ စီးမှုဒဏျခံရတာကွောငျ့ ဆဲလျတှကေို ရရှေညျ ထိခိုကျစပွေီး အိုမငျးမှုဖွဈစဉျကို တိုးစနေိုငျတယျ လို့ သိရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စိတျဖိစီးမှုဖွဈလာရငျ ဖိစီးမှုကိုတှနျးလှနျနိုငျမယျ့ လုပျဆောငျမှုတှကေို ပွုလုပျပေးရပါမယျ … .။
Previous: စနေတွေကို လျှော့ မတွက်ပါနဲ့ စနေတွေ အကြောင်းလေ့လာကြည့်ပါဦး စနေတွေဟာ…..
Next: နတ် လူ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ရန် သိန်းရှစ်ဆယ်တိတိ အလှူရှင်